Qarax xoog leh oo ka dhacay Muqdisho iyo Faahfaahin Wararkii ugu danbeeyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Qarax xoog leh oo ka dhacay Muqdisho iyo Faahfaahin Wararkii ugu danbeeyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Qarax xoog leh ayaa goor dhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho, kasoo jugtiisa laga maqlay qeybo bnadan oo ka mida caasimadda.
Wararkii ugu danbeeyay ee qaraxa ayaa sheegaya inuu ka dhacay Degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadda aada Afisyoone ee 21 Oktoobar.
Waxaa cirka isku shareeray Holaca & Uurada uu dhaliyey qaraxa, iyadoo wararku sheegayaan in qaraxa loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiil ka tirsan UN-ka.
Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa oo is-miidaamin ahaa, waxaana goobta gaaray ciidamo iyo gaadiidka gurmadka degdegga ah.
Previous articleWasaaradda Amniga oo fasaxday bannaanbaxa Berri ee looga horjeedo Farmaajo (Akhriso)
Next articleAlshabaab oo War kasoo saartay Cidda ay la beegsatay Qaraxii Is-miidaaminta ahaa (Sawirro)